युईएफएले ४–२–४ को फर्मेशनमा वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी सूची सार्वजनिक किन गर्‍यो ? - फ्रन्टलाईन नेपाल
युईएफएले ४–२–४ को फर्मेशनमा वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी सूची सार्वजनिक किन गर्‍यो ?
३ माघ २०७६, शुक्रबार १५:५० January 17, 2020 फ्रन्टलाईन नेपाल Comment(0)
एजेन्सी । युरोपियन फुटबल महासंघ (युईएफए)ले सन् २०१९ को सर्वोत्कृष्ट फुटबल खेलाडीको सूची अनौठौ तरिकाले सार्वजनिक गरेको । यसअघि ४–३–३ को फर्मेसनमा खेलाडी सूची सार्वजनिक गर्ने गरेको युईएफएले यस पटक भने ४–२–४ फर्मेुसनमा खेलाडी सार्वजनिक गर्नुको कारण पोर्चुगलका स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई टिममा समेट्नु रहेको बुझिएको छ । सोही कारण दुई मिडफिल्डर मात्रै राखेर फरवार्डको संख्या चार पुर्याएको हो ।
युईएफएले सार्वजनिक गरेको उत्कृष्ट– ११ को सूचीमा लिभरपुलका पाँच, युभेन्ट्स र बार्सिलोनाका समान दुई, बार्यन म्युनिख र म्यानचेस्टर सिटीका एक–एक खेलाडी रहेका छन् ।
एलिसन बेकर (लिभरपुल)
ट्रेन्ट एलेक्जेन्डर अर्नोल्ड (लिभरपुल)
माथिस डी लिग्ट (युभेन्ट्स)
भर्जिल भ्यान डायक (लिभरपुल)
एन्ड्रिउ रोवर्टसन् (लिभरपुल)
फ्रांकी डी जोङ (बार्सिलोना)
केभिन डी ब्रुयना (म्यान्चेस्टर सिटी)
लियोनल मेसी (बार्सिलोना)
साडियो माने (लिभरपुल)
रोवर्टो लेवान्डोस्की (बार्यन म्युनिख)
क्रिस्टियानो रोनाल्डो (युभेन्ट्स)
युईएफले छ महिनामा २० लाखभन्दा बढी समर्थकबाट लिइएको भोटको आधारमा टिमको घोषणा गरिएको युईएफएले जानकारी दिएको छ । तर, भोटको आधारमा रोनाल्डो नपरेपछि उत्कृष्ट ११ को संरचना नै परिवर्तन गरेको हो । यो निर्णयलाई युईएफएका अध्यक्ष एलेक्जेन्डर सर्फरिनले पारिद गरेको बुझिएको छ ।
तर, युईएफएले समर्थकहरुको भोटको अपमान गरेको भन्दै विरोध भएको छ । रोनाल्डोको सट्टामा चेल्सीका एंगोलो कान्टेले स्थान बनाएको र उनीप्रति अपमान गर्दै एकलौटी निर्णय गरेर रोनाल्डो घुसाएको भन्दै फुटबल पण्डितहरुले पनि युईएफएको कदमको विरोध गरेका छन् ।
Tagged champions league, uefa
ओपोका ७ स्मार्टफोनहरु…
२२ माघ २०७६, बुधबार १६:५३ February 5, 2020 फ्रन्टलाईन नेपाल
ओपोले २०१० देखि २०१९ सम्ममा विभिन्न ७ किसिमका स्मार्टफोन भित्राएको छ। ती हुन्ः ओपो फाइन्ड, ओपो फाइन्डर, ओपो युलाइक टु, ओपो एन्थ्री, ओपो आरनाइन, ओपो फाइन्ड एक्स र ओपो रेनो फाइभजी। यी स्मार्टफोनबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ। ओपो फाइन्ड ओपो फाइन्ड (एक्स ९०३) २०११ मा सार्वजनिक गरिएको स्मार्टफोन हो। उक्त फोनमा साइडस्लिप कभर, फूल किबोर्ड […]
भारतमा बलात्कार प्रयासपछि ९ वर्षीया नेपाली बालिकाको हत्या
११ भाद्र २०७६, बुधबार ११:१७ August 28, 2019 फ्रन्टलाईन नेपाल
नयाँ दिल्ली- कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको घटना प्रकरण एक वर्ष नाघिसक्दा पनि चर्चामै छ। प्रहरीले विभिन्न अनुसन्धान समिति बनाए पनि दोषी अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। सामाजिक सञ्जाल तथा मुलधारका मिडियामा निर्मला प्रकरणले निकै ‘स्पेस’ पायो। यसैबीच भारतमा बलात्कार प्रयासपछि एक ९ वर्षीया नेपाली बालिकाको हत्या भयो। तर, निर्मला प्रकृतिकै उक्त घटनाबारे खासै कसैको […]
चेल्सीका नयाँ म्यानेजरमा ‘क्लब हिरो’ लाम्पार्ड
१९ असार २०७६, बिहीबार १७:०५ July 4, 2019 फ्रन्टलाईन नेपाल
काठमाडौं । असार १९ । फ्राङ्क लाम्पार्ड प्रिमियर लिग क्लब चेल्सीका नयाँ म्यानेजर नियुक्त भएका छन् । माउरिजियो सारीले क्लब छाडेपछि क्लबका पूर्व खेलाडी समेत रहेका लाम्पार्ड नयाँ म्यानेजरका रुपमा नियुक्त भएका हुन् । लाम्पार्ड यसअघि डर्बीको म्यानेजर रहेका थिए । डेली मेलका अनुसार चेल्सीले लाम्पार्डलाई भित्र्याउन ४० लाख पाउण्ड खर्च गर्नु परेको छ । […]
अनरको तीन नयाँ प्रोडक्ट सार्वजनिक
“मेस्सीलाई सबै थाहा थियो, मैले केही सिकाउन परेन”:-रोनाल्डिन्हो